दिक्क लागेकाे मानसिक स्थितीमा के गर्ने ? सहयाेगी टिप्स - ज्ञानविज्ञान
तपाइले पढ्नकै लागी मात्र पढिरहनुभएकाे हाे ? काम गर्नकै लागी मात्र काम गरिरहनुभएकाे हाे ? अाफुले पढिरहेकाे या काम गरिरहेकाे कुरासँग अाफ्नाे उधेश्य र रूचि मेल खाएन भने जिन्दगी देखी नै दिक्क लाग्न थाल्छ । अाफ्नाे दैनिक रूटिन देखि नै दिक्क लाग्न थाल्छ ।
त्यसैले अाफुले किन त्याे काम गरिरहेकाे छु भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुहाेस् ।दिक्दारीलाइ हटाउने एउटा मुख्य कुरा रमाउन सिक्नु हाे । जन्मदिन, कुनै विशेय दिन या पर्वहरू अाउँछन् । ति दिनहरूमा अाफ्नाे नियमित कामलाइ ब्रेक गरेर रमाउनुहाेस् । यसले मनमा खुसि मिल्छ, शरिरमा उत्साह अाउँछ र दिमाग ताजा बन्छ ।
केही गर्न नै मन लागेकाे छैन भने कामबाट केही छिन् ब्रेक लिनुहाेस् । कज्जाले सुत्नुहाेस् । यसले गर्दा मानशिक तथा शारिरीक थकान कम हुन्छ र नयाँ उर्जा अाउँछ । त्यसपछी अाफ्नाे नियमित काममा केही फरक ल्याउनुहाेस् । काममा अाफ्नाे लागी पनि समय निकालेर समय तालिका बनाउनुहाेस् ।
एकाेहाेराे काम गर्ने बानी छाेड्नुहाेस् ।कहिलेकाही काममा नयाँपनकाे कमी तथा अाफुमा उत्प्रेरणाकाे कमीले पनि दिक्क लाग्छ । अाफ्नाे कामकाे क्षेत्रमा नयाँ के भइरहेकाे छ बुझ्नुहाेस् । अाफ्ना याेजनाहरू बनाउनुहाेस् । अाफ्नाे कामकाे क्षत्रका केही मानिसहरूलाइ भेटेर कुराकानी गर्नुहाेस् ।
सभा सेमिनारहरूमा सहभागी हुनुहाेस् । काम गर्ने या पढ्ने केही नयाँ तरिका खाेज्नुहाेस् । यसले गर्दा नयाँ जाेस जाँगर अाँउछ ।नयाँ सथी बनाउनुहाेस् । नयाँ ठाउँमा भ्रमका लागी जानुहाेस् । लामाे समयसम्म एक्लै बस्दा या अाफ्नाे मनमा कुरा, विचार व्यक्त गर्न नपाउँदा पनि दिक्दारिले सताउँछ ।
त्यसैले समय निकालेर बाहिर निस्कने, साथीहरूसँग समय बिताउने, अाफ्ना भावना र विचारलाइ डायरीमा टिपाेट गर्ने गर्नुहाेस् । परिवारका सदस्यसँग समय बिताउनुहाेस् । अाफुलाइ मनपर्ने खाना खानुहाेस् । याेगा या मेडिटेसन गर्नुहाेस् । सामाजिक काममा सहभागी हुनुहाेस् । यसले गर्दा दिमागमा सकारात्मक साेतहरू अाउँन थाल्छन् ।
Don't Miss it आफ्नाे लागी उपयुक्त करियरकाे छनाेट यसरी गर्नुहाेस् ?
Up Next के तपाईं आफैलाई साच्चै माया गर्नुहुन्छ ? यसरी जाँच्नुहोस